> Resource> Video> bụ N'ihi Gịnị Ka My MPEG Streamclip-adịghị arụ ọrụ?
The MPEG Streamclip bụ a software mepụtara Squarred 5 na nwere ike ibudata na arụnyere na ma Mac na Windows arụ ọrụ kọmputa. Ọ bụghị naanị free ma bụkwa otu n'ime ihe ka mma software maka video edezi na akakabarede. Ị nwere ike ihu ọma dezie ma tọghata gị video faịlụ ka mmepụta usoro nke MOV, DV, MP4, AVI, DivX na 3GP. Dị ka software-emetụta ndị QuickTime technology, ọ bụ ndabara na ị nwere ike bulite na-egwu ọ bụla QuickTime akwado faịlụ formats dị ka mma. Otú ọ dị, nke nwere ike ọ bụghị mgbe niile ikpe.
Gị MPEG Streamclip nwere ike na-arụ ọrụ na-akpali elu ozi dị ka "agaghị agụ ma ọ bụ na-emeghe faịlụ" ma ọ bụ "eleghara faịlụ Ọkpụkpọ". Mgbaàmà ndị ọzọ na ị ga-achọpụta mgbe gị MPEG Streamclip-adịghị arụ ọrụ bụ mgbe ị na uploaded a video faịlụ ma ọdịyo na-adịghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ kwalite gị Mac pc ka Mountain Odum, abụọ-ego na nweta nkwalite gị MPEG Streamclip dị ka mma. Ma, ị ga-mkpa ịzụta ihe MPEG-2 akụrụngwa si ​​Apple Store. Ọ bụrụ na ọ bụ tupu arụnyere na gị ochie Mac pc, dị nnọọ na-agbalị iṅomi, mado wee tinye faịlụ n'ime otu ọnọdụ na ọhụrụ gị na PC. The ikpeazụ resotu ị nwere bụ ịgbalị bulite video faịlụ jidesie QuickTime na mgbe ahụ na-azọpụta ya dị ka a dakọtara faịlụ Ọkpụkpọ na a na-anabata gị MPEG Streamclip. Ọ bụrụ na ọ ka na-ada ada na-emeghe, egwu ma ọ bụ tọghata gị faịlụ, i nwere ike na-achọ inwe a lee anya na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac.
1 tojupụtara na tọghata gị video faịlụ
Tupu i kpebie ịzụta ihe MPEG-2 akụrụngwa si ​​Apple Store, na-enye ya a na-agbalị na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac. Na-aga n'ihu na ịdọrọ na video faịlụ na tojupụtara ya niile elu. Ọ bụrụ na ị chọrọ iji tọghata gị video faịlụ ozugbo, dị nnọọ họrọ họọrọ mmepụta faịlụ Ọkpụkpọ si Video toolbar na ala nke ihuenyo. Pịa tọghata button ozugbo!
2 Dezie gị video faịlụ na onye ọzọ MPEG Streamclip
Ọ bụrụ na ị na-emeghe ka nhọrọ, mgbe ahụ, i nwere ike ikekwe na-agbalị dezie gị video faịlụ na Video Ntụgharị Ultimate. Ọ dịghị ihe ị na-amaghị si MPEG Streamclip, ị nwekwara ike mfe bee na ewepụtụ gị videos. Na mgbakwunye na nke ahụ, ị ​​nwere ike tinye mmetụta gị na obere vidiyo ọnụ na ntinye nke ndepụta okwu nakwa dị ka watermarks.
3 Nyefee ma ọ bụ na-egwu ya n'ebe ọ bụla
The Video Converter Ultimate enye ihe mgbanwe na okwu nke ndị dị iche iche akakabarede mmepụta formats na ọ na-akwado. N'ihi ya, ị nwere ike ugbu nyefee ma kpọọ gị video faịlụ n'ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ị na-amasị ya. Na-ekiri ndị video clip n'okpuru maka ọzọ na-akpali atụmatụ!
Nweta Best MPEG Streamclip Alternative na OS X Mavericks
Olee otú bulite AVI ka YouTube effortlessly
Olee otú iji tọghata M4V ka MP3